उत्कर्षमा शिल्पा र छबिको घर झगडा, लभ गर्ने बेला ‘तिमी मेरी छोरी जस्ती किन भननुभएन उहाँले ?
काठमाडौं – चर्चित नायिका शिल्पा पोखरेल र निर्माता छबि ओझा पारिवारिक कलहका कारण चर्चाको शिखरमा छन् । ३ वर्ष अघि गुपचुप रुपमा विबाह गरेको यो जोडी अहिले मिल्छ या छुट्टिन्छ भन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन ।
शिल्पाले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेपनि छवि भने शिल्पालाई अझै पनि घर फर्किन आग्रह गरिरहेका छन् । एक अन्तरवार्तामा छबिको आग्रहलाई स्विकारेर तपाई घर जाने संभावना कति छ भन्दा शिल्पाले अब आँफुले भुलेर पनि त्यो घरमा नजाने ठाडै भनेकी छिन् ।
उनले भनिन् अहिले घटना बाहिर आएपछि उहाँ ५५ वर्षको बूढो भएँ भनेर हिँडिरहनु भएको छ। ५५ वर्षको बूढोले लभ गर्ने बेला ‘ल नानी म ५५ वर्षको बूढो, छोरी होस् तँ’ भनेर उहाँले किन भन्नुभएन ? अहिले आएर सहानीभूतिका लागि किन बुढो भन्नुरु त्यतिबेलाचाहिँ २०–२५ वर्षको जस्तो व्यवहार गर्नुलाई पनि शिल्पाले छबिको दोस्रो रुप भएको आरोप लगाइन् ।
अग्नी साक्षी राखेर बिहे गरेको मितिबाटै आँफु छबिको पत्नी भइसके पनि छविले दिएको यातनाका कारण आँफु अब उनीसँग सहकार्य गर्न नसक्ने शिल्पाको तर्क छ ।
शंका गर्ने व्यक्तिलाई संसारमै शान्ति मिल्दैन’
हिन्दु धर्मवालम्वीहरुका लागि गीताको विशेष महत्व रहन्छ । उनीहरु गीताको पाठ गर्ने मात्र नभइ श्रद्धा भक्तका साथ पूजा आरधाना पनि गर्ने गर्दछन् । यहाँ श्रीमद् भागवत गीताका अनमोल वचनहरु उल्लेख गरिएको छ जुन भनाइ तपाईंको जीवनका लागि पनि महत्वपूर्ण बन्न सक्छन् ।
– शंका गर्ने व्यक्तिको लागि न त यस संसारमा शान्ति मिल्छ न त बाहिर नै ।
– यदी मनलाई आफ्नो वसमा राख्न सकिएन भने यसले तपाईं आफैं विरुद्ध शत्रुको व्यावहार गर्दछ ।
– यदी विश्वासका साथ निरन्तर लागि रहन्छ भने हरेक व्यक्ति जे ऊ चाहन्छ त्यो पाउन सक्छ ।
– मानिस आफ्नो विश्वासद्वारा निर्माण हुन्छ, ऊ जस्तो विश्वास गर्दछ, उस्तै बन्दछ ।
– केवल मन मात्र कसैको मित्र वा शत्रु हुन्छ बाँकी सबै भ्रम मात्र हो ।
– नरकका तीन द्वार छन्
– क्रोध, वासना र लोभ ।
– तपाईंलाई कर्मको फलको कुनै इच्छा नै छैन भने कर्मले कुनैपनि हालतमा बाध्न सक्दैन ।
– जसले आफ्नो काममा आनन्द मान्द छ, तिनीहरूले नै कार्यमा पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छन् ।